Ukurhafisa iirhafu e-Wholesale kwi-United States nakwihlabathi liphela mveliso kunye nabenzi | NGCONO
Ukuvota iirhafu eUnited States nakwihlabathi liphela
Njengokuba umphunga ukhula ekuthandeni, iba yinto ekujolise kuyo kwindalo koorhulumente abadinga ingeniso yerhafu. Ngenxa yokuba iimveliso zomphunga zihlala zithengwa ngabantu abatshayayo nababekade betshaya, amagunya erhafu ngokuchanekileyo acinga ukuba imali echithwe kwi-e-cigarettes yimali engasetyenziswanga kwimveliso zecuba zemveli. Oorhulumente baxhomekeke kwimidiza nezinye iimveliso zecuba njengomthombo wengeniso kumashumi eminyaka.
Nokuba izixhobo zokukhupha kunye ne-e-liquid kufanelekile ukurhafiswa njengecuba phantse kufutshane nenqaku. Oorhulumente bababona betyhola abantu abatshayayo kude necuba, kwaye bayaqonda ukuba ingeniso elahlekileyo kufuneka yenziwe. Kuba ukuphapha kujongeka njengokutshaya, kwaye kukho inkcaso enkulu kwezempilo yoluntu ekuphakameni, iba yinto ekujolise kuyo kwezopolitiko, ngakumbi kuba banokuyithethelela irhafu ngeendlela ezahlukeneyo zamabango ezempilo.
Iirhafu ze-Vape ngoku ziyacetyiswa kwaye zidluliswa rhoqo e-United States nakwezinye iindawo. Iirhafu zihlala zichaswa ngabameli bokunciphisa ukonakaliswa kwecuba kunye nabameli bamaqela orhwebo abarhwebayo kunye nabathengi abaphefumlayo, kwaye bahlala bexhaswa yimibutho yolawulo lwecuba njengemiphunga kunye nemibutho yentliziyo.
Kutheni le nto oorhulumente bayirhafisa imveliso?
Iirhafu kwimveliso ethile-edla ngokubizwa ngokuba yirhafu yemveliso-zisetyenziselwa izizathu ezahlukeneyo: ukunyusa imali kwigunya lokurhafisa, ukutshintsha indlela yokuziphatha kwabo bahlawuliswa irhafu, kunye nokuhlawula iindleko zokusingqongileyo, ezonyango kunye neziseko zophuhliso ezenziwe kukusetyenziswa kweemveliso. Imizekelo ibandakanya ukurhafisa utywala ukuthintela ukusela kakhulu, kunye nokurhafisa ipetroli ukuhlawulela ukulungiswa kwendlela.
Imveliso yecuba kudala ijolise ekuhlawuleni irhafu. Ngenxa yokuba ukwenzakaliswa kukutshaya kubeka indleko kuluntu lonke (ukhathalelo lonyango kubantu abatshayayo), abaxhasi beerhafu zecuba bathi abathengi becuba kufuneka balinyathele ityala. Ngamanye amaxesha irhafu yotywala okanye icuba ibizwa ngokuba ziirhafu zesono, kuba zohlwaya nokuziphatha kwabantu abaselayo nabatshayayo-kwaye ithiyori inceda aboni bayeke iindlela zabo ezimbi.
Kodwa ngenxa yokuba urhulumente exhomekeke kwingeniso, ukuba ukutshaya kuyancipha kukho ukunqongophala kwemali ekufuneka kwenziwe nomnye umthombo wengeniso, kungenjalo urhulumente kufuneka anciphise inkcitho. Kwabaninzi oorhulumente, irhafu yecuba ngumthombo obalulekileyo wengeniso, kwaye irhafu ihlawuliswa ukongeza kwirhafu yokuthengisa esemgangathweni evavanyiweyo kuzo zonke iimveliso ezithengisiweyo.
Ukuba imveliso entsha ikhuphisana neecuba, abenzi bomthetho abaninzi bafuna ukurhafisa imveliso entsha ngokulinganayo ukwenza ingeniso elahlekileyo. Kodwa kuthekani ukuba imveliso entsha (masiyibize ngokuba yi-e-cigarettes) inokunciphisa ingozi ebangelwe kukutshaya kunye neendleko zempilo ezinxulumene noko? Oko kushiya abowiso-mthetho bexakekile-ubuncinci abo basokolayo ukufundisisa konke konke.
Rhoqo abenzi bamthetho bakarhulumente bakrazukile phakathi kokuxhasa amashishini endawo anje ngeevenkile ze-vape (abangayifuniyo irhafu) kunye nokukholisa abo balwela amaqela ahlonitshwayo njengeAmerican Cancer Society kunye neAmerican Lung Association (exhasa irhafu rhoqo kwimveliso zomphunga). Ngamanye amaxesha isigqibo sithatha ulwazi olungelulo malunga nokwenzakaliswa komphunga. Kodwa ngamanye amaxesha bayayidinga imali.
Isebenza njani irhafu? Ngaba ziyafana kuyo yonke indawo?
Uninzi lwabathengi base-US bahlawula irhafu yokuthengisa kurhulumente kwiimveliso abazithengayo, ke urhulumente (kwaye ngamanye amaxesha bengingqi) oorhulumente sele bexhamla kwintengiso ye-vape nangaphambi kokuba kongezwe irhafu. Iirhafu zokuthengisa zihlala zivavanywa njengepesenti yexabiso lentengiso yeemveliso ezithengwayo. Kwamanye amazwe amaninzi, abathengi bahlawula "irhafu eyongeziweyo" (VAT) esebenza ngendlela efanayo nerhafu yokuthengisa. Ngokubhekisele kwirhafu yokurhafisa, beza kwiindidi ezahlukeneyo ezisisiseko:
Irhafu yentengiso kwi-e-liquid - Oku kunokuvavanywa kuphela kulwelo oluqukethe inicotine (ke yona irhafu ye-nicotine), okanye kuyo yonke i-e-liquid. Kuba ivavanywa ngokwesiqhelo ngeemililitha, olu hlobo lwerhafu ye-e-yejusi luchaphazela abathengisi be-e-liquid engaphezulu kwebhotile kunokuba kunjalo kubathengisi beemveliso ezigqityiweyo ezinesixa esincinci se-e-liquid (njengepod vapes kunye neecuba). Umzekelo, abathengi beJUUL baya kuhlawula kuphela irhafu kwi-0.7 mL ye-e-liquid kwipod nganye (okanye i-3 mL yepakethi nganye yeepods). Ngenxa yokuba imveliso yecuba ekhupha iimveliso zizonke izixhobo ezisekwe kwipod okanye ii-cigalikes, ii-lobbyists zecuba zihlala zityhalela irhafu yeemililitha nganye
Irhafu yeevenkile zonke- Olu hlobo lwerhafu ye-e-cigarette ihlawulwa ngokubonakalayo ngumthengisi (umhambisi) okanye umthengisi kurhulumente, kodwa iindleko zihlala zidluliselwa kumthengi ngohlobo lwamaxabiso aphezulu. Olu hlobo lwerhafu luvavanywa kwindleko zemveliso umthengisi ahlawuliswa ngayo xa uthenga kwivenkile ekuthengwa kuyo. Rhoqo urhulumente uhlela umphunga njengeemveliso zecuba (okanye "ezinye iimveliso zecuba," ezibandakanya icuba elingenamsi) ngeenjongo zokuvavanya irhafu. Irhafu iyonke inokuvavanywa kuphela kwiimveliso eziqukethe inicotine, okanye inokusebenza kuyo yonke i-e-liquid, okanye zonke iimveliso kubandakanya izixhobo ezingenayo i-e-liquid. Imizekelo ibandakanya iCarlifonia kunye nePennsylvania. Irhafu ye-vape yaseCalifornia yirhafu ethengisa yonke into ebekwa minyaka le ngurhulumente kwaye ilingana nenqanaba elidityanisiweyo lazo zonke iirhafu ezikwiigarethi. Kusebenza kuphela kwiimveliso eziqukethe inicotine. Irhafu yasePennsylvania yaseVape yasekuqaleni yayisebenza kuzo zonke iimveliso, kubandakanya izixhobo kwanezinto ezingafakwanga i-e-liquid okanye inikotini, kodwa inkundla yagweba ngo-2018 ukuba urhulumente akanakho ukuqokelela irhafu kwizixhobo ezingenayo inikotini.
Ngamanye amaxesha ezi ntlawulo zerhafu zihamba kunye "nomgangatho werhafu," evumela urhulumente ukuba aqokelele irhafu kuzo zonke iimveliso ivenkile okanye ivenkile ethengisa izinto ezikhoyo kumhla werhafu eqala ukusebenza. Ngokwesiqhelo, umthengisi wenza uluhlu lwezinto ngaloo mhla kwaye abhale itsheki kurhulumente ngemali epheleleyo. Ukuba ivenkile yasePennsylvania ibinexabiso le- $ 50,000 yokuthengisa ezandleni zoovimba, umnini ebeya kuba noxanduva lokuhlawula kwangoko i- $ 20,000 kurhulumente. Kumashishini amancinci angenayo imali eninzi esandleni, irhafu yomgangatho ngokwawo inokusongela ubomi. Irhafu ye-vape ye-PA yagxotha ngaphezulu kweivenkile ze-vape ze-100 ngaphandle kweshishini kunyaka wayo wokuqala.
Ukuvota iirhafu eUnited States
Akukho rhafu yomdibaniso kwiimveliso zomphunga. Iibhili ziye zaziswa kwiCongress kwimiphunga yerhafu, kodwa akukho namnye oye kwivoti yeNdlu epheleleyo okanye iNdlu yeeNgwevu okwangoku.
Urhulumente wase-US, umhlaba, kunye neerhafu zalapha
Ngaphambi kowe-2019, amazwe alithoba kunye neSithili seColumbia zirhafisa iimveliso eziphumayo. Elo nani liphindaphindwe kabini kwiinyanga ezisixhenxe zokuqala zika-2019, xa uloyiko lokuziphatha malunga ne-JUUL kunye nolutsha olufikisayo olwalubambe imixholo phantse yonke imihla ngaphezulu konyaka lunyanzela abameli ukuba benze into "yokuphelisa ubhubhane."
Okwangoku, isiqingatha samazwe ase-US anoluhlobo oluthile lwerhafu yemveliso yelizwe. Ukongeza, iidolophu kunye neekharityhulam kwamanye amazwe zineerhafu zazo, njengoko kunjalo nakwisiThili saseColumbia nasePuerto Rico.
Ngelixa iAlaska ingenayo irhafu yelizwe, ezinye iindawo zikamasipala zineerhafu zazo ze-vape:
IJuneau Borough, i-NW Arctic Borough kunye nePetersburg ziyafana iipesenti ezingama-45 zerhafu ethengisa iimveliso ze-nicotine
IMatanuska-Susitna Borough ine-55% yerhafu ethengisa yonke into
Irhafu yaseCalifornia "kwezinye iimveliso zecuba" isetwa minyaka le yiBhodi yoLingano. Ibonisa ipesenti yazo zonke iirhafu ezivavanyiweyo kwicuba. Ekuqaleni le nto ibifikelela kwiipesenti ezingama-27 zexabiso lokuthengisa, kodwa emva kwesindululo sama-56 inyuse irhafu kwiigarethi ukusuka kwi-0.87 yeedola ukuya kwi-2.87 yepakethi, irhafu ye-vape inyuke kakhulu. Kunyaka oqala ngoJulayi 1, 2020, irhafu ngama-56.93% yeendleko zexabiso elipheleleyo kuzo zonke iimveliso eziqukethe inicotine
Urhulumente unerhafu eneeerhafu ezimbini, evavanya i-0.40 yeedola nge-eililitha nganye kwiimveliso zenkqubo evaliweyo (iipods, iikhatriji, ii-cigalikes), kunye ne-10% yokuthengiswa kweemveliso kwenkqubo evulekileyo, kubandakanya i-e-liquid kunye nezixhobo
I-0.05 yeedola nge-milliliter yerhafu kwi-nicotine equkethe i-e-liquid
Ikomkhulu lesizwe lihlela umphunga “njengezinye iimveliso zecuba,” kwaye livavanya irhafu kwixabiso elithengiswayo ngokusekelwe kwinqanaba elichazwe kwixabiso lexabiso elikhulu leecuba. Kunyaka-mali okhoyo ngoku, ophela ngoSeptemba 2020, irhafu iseti kwi-91% yeendleko zexabiso eliphezulu zezixhobo kunye ne-e-liquid equkethe i-nicotine
Idola eyi- $ 0.05 ngerhafu yemililitha kwi-e-liquid kwiimveliso zenkqubo evaliweyo (imidumba, iikhatriji, icigalike), kunye ne-7% yerhafu ethengisa yonke into kwizixhobo zenkqubo evulekileyo kunye ne-e-liquid yeebhotile eza kuqala ngoJanuwari 1, 2021
Irhafu ye-15 yeepesenti kwiivenkile zonke ezinyukayo. Ukongeza kwirhafu yelizwe lonke, zombini i-Cook County kunye nesixeko saseChicago (esikwi-Cook County) baneerhafu zabo ze-vape:
IChicago ivavanya i-0.80 yeedola kwibhotile nganye kulwelo oluqukethe inicotine kunye ne- $ 0.55 ngeemililitha. (Iimpompe zeChicago kufuneka zihlawule i $ 0.20 nge-mL nganye yeCape County tax.) Ngenxa yeerhafu ezigqithileyo, iivenkile ezininzi zevape eChicago zithengisa i-zero-nicotine e-liquid kunye neefoto ze-DIY nicotine ukunqanda irhafu ephezulu ye-mL enkulu iibhotile
Iimveliso zerhafu zaseCook County eziqukethe inicotine ngexabiso leedola eziyi-0.20 ngeemililitha
Idola eyi- $ 0.05 ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid, kunye okanye ngaphandle kwe-nicotine
Irhafu ye-15 yeepesenti kwiivenkile ze-e-ulwelo kunye nezixhobo zenkqubo evulekileyo, kunye ne-1.50 yeerhafu kwiyunithi yerhafu kwiipods kunye neekhatriji ezikhethiweyo.
Irhafu yeepesenti ezingama-43 kuzo zonke iimveliso ezinomphunga
Akukho rhafu yelizwe liphela eMaldin, kodwa isiphaluka esinye sinerhafu:
Isithili saseMontgomery sibeka iipesenti ezingama-30 zerhafu ethengisa yonke imveliso, kubandakanya izixhobo ezithengiswe ngaphandle kolwelo
Iipesenti ezingama-75 zerhafu ethengisa yonke imveliso kuzo zonke iimveliso ezinomphunga. Umthetho ufuna ukuba abathengi bavelise ubungqina bokuba iimveliso zabo ezikhutshelweyo ziye zahlawuliswa irhafu, okanye baphantsi kokuhluthwa kunye nesohlwayo se- $ 5,000 kwityala lokuqala, kunye ne- $ 25,000 yezolwaphulo
Ngo-2011 iMinnesota yaba lilizwe lokuqala ukumisela irhafu kwii-e-cigarettes. Irhafu ekuqaleni yayiyi-70% yeendleko zexabiso elipheleleyo, kodwa yonyuswa ngo-2013 ukuya kuma-95% okuthengiswa ngokubanzi kuyo nayiphi na imveliso equlathe inicotine. Iicigalikes kunye nemiphunga yomphunga-kunye neekiti zokuqalisa ezibandakanya ibhotile ye-e-liquid-irhafiswa kwi-95% yexabiso lazo lonke, kodwa kwi-e-liquid esebhotileni kuphela i-nicotine yona irhafu.
Irhafu ye-30% ngokuthengisa yonke imveliso
Irhafu ye-8% kwiivenkile ezivulekileyo zenkqubo evulekileyo, kunye ne- $ 0.30 ngeemililitha kwiimveliso zenkqubo evaliweyo (imidumba, iikhatriji, icuba)
New Jersey irhafu e-ulwelo $ 0.10 ngeemililitha kwimveliso pod-kunye iCartridge-based, 10% yexabiso lokuthengisa e-engamanzi eBhotile, kwaye 30% lehoseyile izixhobo. Abameli bezomthetho eNew Jersey bavotele ngoJanuwari 2020 ukuphinda kabini irhafu ye-e-liquid, kodwa umthetho omtsha wavotelwa yirhuluneli uPhil Murphy
INew Mexico ine-e-liquid yerhafu enee-tiered ezimbini: i-12.5% ​​yehoseyile kulwelo lwebhotile, kunye ne- $ 0.50 kwipod nganye, kwikhatriji, okanye kwi-cigalike enomthamo ongaphantsi kweemililitha ezintlanu.
Irhafu ye-20% yentengiso kuzo zonke iimveliso zomphunga
I $ 0.10 ngerhafu yemililitha kwicicotine equkethe i-e-liquid
Ngokuqinisekileyo eyona rhafu yaziwa kakhulu kwilizwe liphela yipesenti ezingama-40 zePennsylania. Ekuqaleni kwavavanywa kuzo zonke iimveliso zomphunga, kodwa inkundla yagweba ngo-2018 ukuba irhafu ingasetyenziselwa kuphela i-e-liquid kunye nezixhobo ezibandakanya i-e-liquid. Irhafu yomphunga ye-PA ivale ngaphezulu kwama-100 amashishini amancinci kurhulumente kunyaka wokuqala emva kokuvunywa kwawo
I $ 0.05 ngerhafu yemililitha kwi-e-liquid kunye ne- $ 3.00 kwirhafu yeyunithi kwi-e-cigarettes
Irhafu engama-56 yeepesenti kwi-e-liquid kunye nezixhobo ezizalisiweyo
Iipesenti ezingama-92 zerhafu kwi-e-liquid nakwizixhobo- eyona rhafu iphakamileyo ibekwe naliphi na ilizwe
Idola eyi-0,066 nge-milliliter yerhafu kwi-nicotine equkethe i-e-liquid
Umbuso udlulise i-e-liquid yerhafu eneevenkile ezimbini ngo-2019. Ibiza abathengi i $ 0.27 ngeemililitha nganye kwijusi ye-e-kunye okanye ngaphandle kwe-nicotine -eemidumba kunye neekhatriji ezincinci kune-5 mL ngobukhulu, kunye ne-0.09 yeedola ngeemililitha nganye kulwelo kwizikhongozeli. inkulu kune-5 mL
Idola eyi- $ 0.075 ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid, kunye okanye ngaphandle kwe-nicotine
Idola eyi- $ 0.05 ngerhafu yemililitha kwi-e-liquid kwiimveliso zenkqubo evaliweyo (imidumba, iikhatriji, icuba) kuphela — kunye okanye ngaphandle kwe-nicotine
Irhafu ye-15 yeepesenti kwiivenkile zonke zomphunga
Irhafu yeVape kwihlabathi liphela
Njengase-United States, abezomthetho kwihlabathi liphela abayiqondi kakuhle imveliso yomphunga okwangoku. Iimveliso ezintsha zibonakala kubenzi bomthetho njengesoyikiso kwirhafu yerhafu yecigarette (okuyinyani eyiyo), ke oko kukunyanzela ukuba uhlala ubeka irhafu ephezulu kunye nethemba lezona zilungileyo.
Iirhafu ze-vape zamanye amazwe
I-leke ezili-10 (i-0.091 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha nganye kwi-nicotine ene-e-liquid
I-manats ezingama-20 (i-11.60 yeedola) ngerhafu yeritha (malunga ne- $ 0.01 ngeemililitha) kuyo yonke i-e-liquid
Irhafu yi-100% yexabiso langaphambi kwerhafu kwi-nicotine equkethe i-e-liquid. Oko kulingana ne-50% yexabiso lentengiso. Injongo yerhafu ayicacanga, kuba ii-vapes kuthiwa zithintelwe kweli lizwe
Nangona iCroatia inerhafu ye-e-liquid kwiincwadi, ngoku ibekwe kwi-zero
I-0.1,2 yeedola (i-0.14 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
Ipalamente yase-Danish ipasise i-DKK 2.00 ($ 0.30 US) ngerhafu yemililitha, eya kuthi iqale ukusebenza ngo-2022.
NgoJuni 2020, i-Estonia yayirhoxisa irhafu kwi-e-liquids kangangeminyaka emibini. Ilizwe ngaphambili lalinyanzelisa i-0.20 (i-0.23 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-Aur 0.30 ($ 0.34 yase-US) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-0.10 yeedola (i-0.11 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-HUF 20 ($ 0.07 yase-US) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
Irhafu yase-Indonesia ngama-57% exabiso lentengiso, kwaye kubonakala ngathi yenzelwe kuphela i-nicotine ene-e-liquid ("izicatshulwa kunye nezinto zecuba" ligama). Amagosa elizwe abonakala ekhetha ukuba abemi baqhubeke betshaya
Emva kweminyaka yohlwaya abathengi ngerhafu eyenze ukuba vaping kabini kubize njengokutshaya, ipalamente yase-Italiya yavuma iqondo elitsha, nelisezantsi lerhafu kwi-e-ulwelo ngasekupheleni kuka-2018. Irhafu entsha ngama-80-90% ezantsi kunaleyo yokuqala. Irhafu ngoku ifikelela kwi- € 0.08 ($ 0.09 US) ngeemililitha nganye ye-nicotine equkethe i-e-liquid, kunye ne- € 0.04 ($ 0.05 US) yeemveliso ze-zero-nicotine. Ngomphunga wase-Italiya okhetha ukwenza i-e-liquid yabo, i-PG, i-VG, kunye nee-flavouring azirhafiswa
Izixhobo kunye ne-nicotine equkethe i-e-liquid zirhafiswa ngexabiso le-200% ye-CIF (indleko, i-inshurensi kunye nemithwalo)
Nangona iKazakhstan inerhafu ye-e-liquid kwiincwadi, ngoku ibekwe kwi-zero
Irhafu yaseKenya, eyaphunyezwa ngo-2015, ngamawaka amathathu eedola zaseKenya (i-29.95 yeedola zaseMelika) kwizixhobo, kunye ne-2,000 (i-19,97 yeedola yaseMelika) kwizinto ezizalisa kwakhona. Iirhafu zenza ukuba kubize kakhulu kunexabiso lokutshaya (irhafu yecigarette iyi- $ 0.50 ngepakethi nganye) -kwaye mhlawumbi yeyona irhafu iphezulu ehlabathini
I-1 yaseKyrgyzstani Som ($ 0.014 yaseMelika) ngerhafu yemililitha nganye kwi-nicotine ene-e-liquid
Irhafu engaqhelekanga yaseLatvia isebenzisa iziseko ezibini ukubala irhafu kwi-e-liquid: kukho i- € 0.01 ($ 0.01 US) ngerhafu yemililitha, kunye nerhafu eyongezelelweyo (€ 0.005 nge-milligram) kubunzima be-nicotine esetyenzisiweyo
I-Aur 0.90 (i-1.02 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-0.2 yaseMacedonia iDenar ($ 0.0036 yase-US) ngerhafu nganye yerhafu kwi-e-liquid. Umthetho uqulethe ukuvumela ukunyuka okuzenzekelayo kwinqanaba lerhafu kaJulayi 1 kunyaka ngamnye ukusuka ngo-2020 ukuya ku-2023
I-10 Philippines pesos ($ 0.20 US) nge-10 milliliters (okanye iqhezu le-10 mL) yerhafu kwi-nicotine equkethe i-e-fluid (kubandakanya iimveliso ezikhethiweyo). Ngamanye amagama, nayiphi na ivolumu engaphezulu kwe-10 mL kodwa phantsi kwe-20 mL (umzekelo, i-11 mL okanye i-19 mL) ihlawuliswa kwinqanaba le-20 mL, njalo njalo
I-0.50 PLN ($ 0.13 US) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-Aur 0.30 ($ 0.34 yase-US) ngerhafu yemililitha nganye kwi-nicotine equkethe i-e-liquid
I-0.52 iRomania Leu (i-0.12 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kwi-nicotine ene-e-liquid. Kukho indlela irhafu enokuthi ihlengahlengiswe minyaka le ngokusekwe kunyuko lwamaxabiso abathengi
Iimveliso ezilahlwayo (ezinje nge-cigalikes) zirhafeliswa iiruble ezingama-50 ($ 0.81 e-US) kwiyunithi nganye. I-e-liquid equkethe iNicotine irhafiswa kwi-ruble ezili-13 zeedola eziyi-0.21 zaseMelika) ngeemililitha
Irhafu yi-100% yexabiso langaphambi kwerhafu kwi-e-liquid nakwizixhobo. Oko kulingana ne-50% yexabiso lentengiso.
I-4.32 yaseSerbia Dinar (i-0.41 yeedola zaseMelika) ngerhafu yemililitha kuyo yonke i-e-liquid
I-€ 0.18 ($ 0.20 US) ngerhafu yemililitha nganye kwi-nicotine equkethe i-e-liquid
Ilizwe lokuqala lokunyanzelisa irhafu ye-vape yesizwe yayiyiRiphabhlikhi yaseKorea (iROK, ehlala ibizwa ngokuba yiSouth Korea eNtshona) -ku-2011, kwakuloo nyaka iMinnesota yaqala ukurhafisa i-e-liquid. Okwangoku ilizwe lineerhafu ezine ezahlukileyo kwi-e-liquid, nganye ibekelwe injongo ethile yenkcitho (iNgxowa-mali kaZwelonke yokuKhuthaza ezeMpilo). (Oku kuyafana ne-United States, apho irhafu yomdiza yomdibaniso yayimiselwe ukuhlawulela iNkqubo ye-Inshurensi yezeMpilo yaBantwana). Iirhafu ezahlukeneyo zaseMzantsi Korea ze-e-liquid zongeza ukuya kuthi ga kwi-1,799 ephumeleleyo ($ 1.60 US) ngeemililitha, kwaye kukho irhafu yenkunkuma kwiikhatriji ezilahlayo kunye nemidumba ye-24.2 ephumeleleyo ($ 0.02 US) ngeekhatriji ezingama-20.
I-2 krona ngeemililitha ($ 0.22 zase-US) zerhafu kwi-nicotine equkethe i-e-liquid
I-United Arab Emirates (i-UAE)
Iicigarete zobushushu, Epen, Ukutshaya enye indlela, Newport E umdiza, Ipakethe yeBlister ye-cigarette, Isigarethi soLwelo esiTywala,